Amandla ethu Okugaya i-Alumina Ceramics Njengoba Ngezansi:
-Ingxenye encane ukuya kobukhulu bengxenye enkulu.
-Iqinile ukumelana ne-abrasive, eco-friendly kanye nobulukhuni obungavamile.
-Izilinganiso ezinhle ezingaguquguquki ukusuka kwiqoqo lesivivinyo ukuya ekukhiqizeni ngobuningi.
-Custom Ceramic Grinding Burr ku-aluminium oxide ceramics prototype kumthamo wokukhiqiza wevolumu ephezulu.
Le mikhiqizo isetshenziswa kakhulu ezinhlotsheni ezahlukahlukene zokugaya upelepele, izigayi zikasawoti, izigayi zekhofi nezinye izigayi, inhlabathi yezinhlamvu inobukhulu obulinganayo futhi ikhombisa ukunambitheka nombala okusha nokunuka kamnandi. Le mikhiqizo ishiswe ngokugcwele ngo-95% AL2O3 futhi ihambisana nemvelo, iphephile, iyagqokeka, ihlala isikhathi eside futhi isebenza kahle ngokumelene nokushaqeka.
i-ceramic grinder ikhofi core i-alumina ceramic pepper core